malunga Law & More B.V. | Ifemu yoMthetho waseDatshi | Eindhoven kunye neAmsterdam
Law & More yinkampani yezomthetho yaseDatshi eguquguqukayo kunye neengcebiso zerhafu egxile kumthetho wobumbano waseDatshi, wezorhwebo nowerhafu kwaye usekwe eAmsterdam nase-Eindhoven Science Park - iDutch "Silicon Valley" eNetherlands. Ngemvelaphi yaseDatshi kunye nemvelaphi yerhafu, Law & More Idibanisa ukwaziwa kwenkampani enkulu nengcebisi ngerhafu ngokuthathela ingqalelo kwiinkcukacha kunye nenkonzo ehleliweyo onokuyilindela kwinkampani yeeboutique. Ngokwenene singamazwe aphesheya ngokwamanqanaba nobume beenkonzo zethu kwaye sisebenzela uluhlu lwabathengi baseDatshi nabamazwe aphesheya, ukusuka kumashishini nakumaziko ukuya ebantwini.
I-Multidisciplinary Dutch Firm Law
Law & More yinkampani yezomthetho yaseDatshi eguquguqukayo kunye neengcebiso zerhafu egxile kumthetho wobumbano waseDatshi, wezorhwebo nowerhafu kwaye usekwe eAmsterdam nase-Eindhoven Science Park - iDutch "Silicon Valley" eNetherlands.
Ngobume bayo baseDatshi kunye nemvelaphi yerhafu, Law & More Idibanisa ukwaziwa kwenkampani enkulu nengcebisi ngerhafu ngokuthathela ingqalelo kwiinkcukacha kunye nenkonzo ehleliweyo onokuyilindela kwinkampani yeeboutique. Ngokwenene singamazwe aphesheya ngokwamanqanaba nobume beenkonzo zethu kwaye sisebenzela uluhlu lwabathengi baseDatshi nabamazwe aphesheya, ukusuka kumashishini nakumaziko ukuya ebantwini.
Law & More Unalo iqela elizinikeleyo lamagqwetha ezolwimi ezininzi kunye nabacebisi ngerhafu ngolwazi oluphangaleleyo kumthetho wekhontrakthi yaseDutch, umthetho wokudibana waseDatshi, umthetho wentlawulo wase-Datshi, umthetho wokuqashwa waseDatshi kunye nomthetho wepropathi yamanye amazwe. Ifemu ikwagxininisa ngakumbi kulwakhiwo lwerhafu olusebenzayo kunye nezinto ezenziwayo, umthetho wamandla waseDatshi, umthetho wezemali waseDatshi kunye nokuhanjiswa kwezindlu.
Nokuba ungumanyano lwamazwe ngamazwe, i-SME, ishishini elihlumayo okanye umntu ozimeleyo, uyakufumanisa ukuba indlela esisebenza ngayo ihlala ifana: ukuzibophelela ngokupheleleyo ekufikeleleni nasekuphenduleni kwiimfuno zakho, ngamaxesha onke. Sinikezela ngaphezulu kokugqwesa kwezobuchwephesha kwezomthetho-sinikezela ngezisombululo ezinobunkunkqele, zobuninzi beenkonzo kunye nenkonzo enabantu.
Law & More ikwabonelela ngokusonjululwa kwengxabano yezomthetho kunye neenkonzo zamatyala kwiinkampani nabantu. Uqhuba uvavanyo olulungeleleneyo lwamathuba kunye neengozi ngaphambi kwayo yonke inkqubo yezomthetho. Inceda abathengi ukusuka kwinqanaba lokuqala ukuya kwinqanaba lokugqibela leenkqubo zomthetho, iseka umsebenzi wayo kwisicwangciso esicingisisiweyo, nesicwangcisiweyo. Ifemu isebenza njengegqwetha elingaphakathi ezindlini kwiinkampani ezahlukeneyo zaseDutch nakwamanye amazwe.
Ngaphezulu koku, le nkampani inobuchule ekuqhubeni inkqubo yothethathethwano olunzima kunye neenkqubo zokulamla eNetherlands. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, sinikezela abathengi bethu kwizifundo zoqeqesho kwinkampani, ezilungiselelwe iimfuno zabasebenzi babo, ngezihloko ezahlukeneyo zezomthetho, ezibaluleke kakhulu kwinkampani ekuthethwa ngayo.
Wamkelekile ukuba ujonge iwebhusayithi yethu, apho uyakufumana ulwazi oluthe kratya malunga Law & More. Ukuba unqwenela ukuxoxa ngomcimbi othile osemthethweni okanye ukuba unombuzo malunga neenkonzo zethu, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana.
Ifemu yethu lilungu lothungelwano lwe-LCS lwabameli olusekwe e-Hague, eBrussels naseValencia.
"Law & More ubambe elinye icala aligcine phantsi koxinzelelo ”
IFilosofi (ngqiqo-bulumko) yethu
Indlela yethu yokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo kwezomthetho wamaDatshi kwezomthetho, amagqwetha kunye neenkonzo zokucebisa ngerhafu isemthethweni, urhwebo kunye nokuba luyasebenza. Sisoloko siqala ngokungena kwiimbombo zeshishini labathengi kunye neemfuno zethu. Ngokulindela iimfuno zabo amagqwetha ethu ayakwazi ukubonelela ngeenkonzo zobungcali kwinqanaba eliphezulu.
Isidima sethu sakhiwe ekuzinikeleni okukhulu ekusombululeni kunye nokuhlangabezana neemfuno ezizezinye zomthengi ngamnye wethu nokuba ngaba ziinkampani zamazwe aphesheya, amandla e-Datshi, ukwandisa amashishini amatsha okanye abantu babucala. Sizabalazela ukunceda abathengi bethu ngeyona ndlela isebenzayo yokufezekisa iinjongo zabo ngelixa kuthathelwa ingqalelo imeko yemeko yezoqoqosho yamazwe amaninzi abasebenza kuyo baphuhlisa ishishini labo.
Abathengi bethu bakumbindi wayo yonke into esiyenzayo. Law & More ke ngoko sizibophelele ngokupheleleyo kwisiseko apho siya kuphuhlisa khona ukuthembeka kunye nengqibelelo. Ukususela ekuqaleni kwethu sizibophelele ekutsaleni abameli abanetalente nabazinikeleyo kunye nabacebisi ngerhafu abanikezela ngeyona miphumo mihle kubaxumi bethu, ukoneliseka kwabo kungaphambili nokuba singobani kwaye senza ntoni.
Ngokwembali, iNetherlands ibisoloko ilolawulo olunomtsalane kakhulu lokuqulunqa imisebenzi yayo ye-EU kunye nemisebenzi yehlabathi liphela, ukutyala imali, ukuqhuba nokwenza ishishini. I-Netherlands iyaqhubeka ngokutsala inani elikhulu leenkampani zobuchwephesha kunye nezobuchwephesha bezizwe ezahlukeneyo kunye "nabemi behlabathi".
yethu Umthengi oManyeneyo Ukuziqhelanisa kugxila kuluhlu olubanzi lwamashishini asebenzayo ngaphakathi njengeenkampani zikarhulumente nezabucala ezibandakanyiweyo eNetherlands kunye nemida enqamlezayo.
The Amakhasimende abucala ukuziqhelanisa Law & More ijolise kuncedo lomntu ngamnye kunye neentsapho zamanye amazwe, ezenza imisebenzi yazo yeshishini kulawulo lwesiDatshi. Abathengi bethu bamazwe aphesheya bavela kumazwe ahlukeneyo kunye neemvelaphi. Bangabarhwebi abaphumeleleyo, abaphuma ngaphandle kunye nabanye abantu abanomdla kunye neeasethi kwimimandla eyahlukeneyo.
Abathengi bethu abaManyeneyo kunye nabazimeleyo bahlala befumana umgangatho olinganayo wenkonzo ezinikezelweyo, ezinikezelweyo kunye nezifihlakeleyo, ezenzelwe ngokukodwa ukufezekisa iimfuno neemfuno zabo.